Suuragal ma tahay in DFS lagu cadaadiyo in ay fasaxdo dibadbaxa
Wakiilada kala duwan ee Beesha Caalamka ayaa sheegay ka hadlay dibadbaxyada Midowga Musharixiinta ay iclaamiyeen markale, kadib markii Xukuumaddu ay hor istaagtay isku daygoodii 19-ka Febaraayo 2021.
Dowladda Federaalka ayaa ku doodeysa in xaaladda Covid-19 in aan la dhayalsan karin kiisaska ay soo gudbisay Wasaaradda Caafimaadka oo intooda badan laga helay Gobolka Banaadir, sidaas awgeed isu imaatinka dadka la joojiyay si loo yareeyo.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq oo la siiyay Khudbaddii ugu dambeysay ee Shirka Golaha Ammaanka ayaa Xukuumadda ku difaacday go’aanka ay ku joojisay isu soo baxa Musharixiinta.
Midowga Musharixiinta ayaa si cad u sheegay in aysan joojin doonin isu soo baxooda, maadaama uu u arko mid lagu soo bandhigayo fariinta muujineysa in loo baahan yahay qabashada Doorashooyinka Dalka, xorriyadda hadalka & Dimuqraadiyadda.
Is maandhaafka ka dhashay dibadbaxii 19-ka Febaraayo 2021:
Dowladda Federaalka & Midowga Musharixiinta ayaa isku maan-dhaaftay qabsashada dibadbax Golahaas uu ku sheegay in uu yahay mid nabadeed oo looga soo horjeedo Doorashooyinka dhaafay waqtigooda, halka Xukuumaddu ay ku doodeyso in la joojiyay isu imaatinka Bulshada sabab ka dhalatay soo laba-kacleynta Xannuunka Covid-19.
Ciidamada Ammaanka Dowladda Federaalka ayaa is hor istaagay dibadbax Caasimadda ay ka iclaamiyeen Musharixiinta in uu qabsoomo 19-kii Febaraayo 2021, waxaana haben saq dhexe iska hor imaad uu ka dhacay meel aan sidaas uga fogeyn Madaxtooyada.
Madaxweynayaashii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed & Xasan Sheekh Maxamuud oo uu wehliyo Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka ahna Madaxweynihii koowaad ee DG Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa degay Hotel u dhaw Madaxtooyada.
Sababta ay halkaas u degeen xiligaas waxa ay Musharixiintu ku sheegeen in ay ka ag dhawaanayaan Daljirka Daahsoon oo ah madasha ay u garteen in ay ku qabtaan isu soo baxooda nabadeed.
Degmooyin dhowr ah ayaa dadka degen waxa ay hurdada uga soo salaleen iska hor imaad dhexmaray Ciidamada Dowladda Federaalka & ilaalada Musharixiinta, waxaana markii hore ay ku jiifteen dareen la xiriira in waxa dhacay ay dhici karaan.
Saacado kadib waxaa sidoo kale la rasaaseeyay dibadbax ay hormuud u ahaayeen Xubno katirsan Midowga Musharixiinta, xaalka ayaa markii dambe kusoo laabtay sidii hore, kadib markii Xukuumaddu ay qaaday ciidamada ay dhigtay jidadka.
Haddaba, Suuragal ma tahay in Dowladda Federaalka lagu cadaadiyo in ay fasaxdo dibadbax nabadeed oo ay qabsadaan Musharixiinta?
“Dhammaan Lenglet hadda waa dilayaa” – Xiddig